November 10, 2020 - Amawpyay
ဒီနှစ်ပြည်ခိုင်ဖြိုးနိုင်ရမယ် မနိုင်ရင် မြန်မာပြည်အနှံ့ အခမဲ့အိပ်ခွင့် ပေးမယ်ဆိုသော မိန်းကလေး အပြင်မှာ ဒုက္ခရောက်
ဒီနှစ်ပြည်ခိုင်ဖြိုးနိုင်ရမယ် မနိုင်ရင် မြန်မာပြည်အနှံ့ အခမဲ့အိပ်ခွင့် ပေးမယ်ဆိုသော မိန်းကလေး အပြင်မှာ ဒုက္ခရောက် အဆိုပါပုံမှာ အွန်လိုင်းပေါ် အနှံ့အပြား မြင်တွေ့နေရပြီး လူတိုင်းလိုလို သိနေသော ပုံဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်ပုံမှာ တင်ခဲ့သော မိန်းကလေးက ရိုးရိုးသားသားပဲ တင်ခဲ့တာပါ ဒါကို ကျောက်ဆည်မြို့နယ်၊ မြောက်ဦးရွာမှ လူယုတ်မာ မျိုးထက်ဇော်နှင့် သူငယ်ချင်းအပေါင်းအပါ တစ်သိုက်က အဆိုပါ ပုံပိုင်ရှင် မိုးမြင့်ကြည်ရဲ့ပုံကို တင်၍ ပေါက်ကရယုတ်မာကာ မဟုတ်ပဲ တင်ခဲ့ပါတယ်လို့ ရွာသားတစ်ဦးက ပြောပြပါတယ်။ အဆိုပါ မိုးထက်ဇော်နဲ့ သူ့ရဲ့ သူငယ်ချင်းများက မိုးမြင့်ကြည်ရဲ့ပုံနှင့် accကို ယူသုံး အတုပြုလုပ်ကာ ငွေညစ်တောင်းခြင်း၊ မဖွယ်မရာပုံများပြပြီး ခြိမ်းခြောက်ခြင်းနှင့်အတူ အဆိုပါ မိန်းကလေးပုံမှာ လူယုတ်မာတစ်သိုက် …
ဆံပင်ပါးသူများ လိုက်နာသင့်သည့်် အချက်များ
ဆံပင်ပါးသူများ လိုက်နာသင့်သည့်် အချက်များ ဆံပင်ပါးနေပြီထင်ရင် ဒီအချက်တွေကို လိုက်နာပါ 1. ဆံသားတွေကို သန့်ရှင်းအောင်ထားပါ။ ဆံပင်တွေမှာ အဆီတွေ ထွက်နေရင် ပါးတယ်လို့ ပိုပြီး ထင်ရ ပါတယ် ။ ဒါ့ကြောင့် ခေါင်းပုံမှန်လျှော်ပါ။ 2. ပျော့ဆေးကို နည်းစနစ် မှန်ကန် စွာသုံးပါ။ ဆံသားတွေေ ခြာက်သွေ့ပြီး အရောင်မွဲေ နရင် ပျော့ဆေးကို ခေါင်းတစ်ခေါင်း လုံးပေါ်ကို မလိမ်းသင့် ပါဘူး။ ပိုပြီးခြောက်သွေ့တယ်လို့ ထင်ရတဲ့ ဆံပင်အဖျား ဘက်တွေကိုပဲ ပျော့ဆေး အနည်းငယ် လိမ်းပေးပါ။ 3. ဆံပင်အဖျားတွေ ကို ပုံမှန် ညှပ်ပေးပါ။ ဆံပင်တွေ ကျန်းမာ သန်စွမ်းစေ ဖို့နဲ့ ကြည့်ကောင်းစေဖို …
အဆီကျိတ်အတွက် အစွမ်းထက် သဘာဝဆေးနည်း
အဆီကျိတ်အတွက် အစွမ်းထက် သဘာဝဆေးနည်း ငါကတော့ အဆီကျိတ်(lipomas)ကို သဘာဝဆေးဝါးတွေနဲ့ဘယ်လိုကုကြမလဲပေါ့နော်…သူ့ကို (fatty tumors) ဟူ၍လည်း ခေါ်ဆို ပါတယ်။ ဒီရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီး လူတော်တော်များများက စာပို့ပြီး မေးထားကြ ပါတယ်။ ဒီရောဂါဟာ လူသားတို့၏ အရေပြားပေါ်၌ ဖြစ်တတ်ကြသလို တိရိစ္ဆာန်သတ္တဝါတွေများလည်း ဖြစ်တတ် ပါတယ်။ သဘာဝဆေးနည်းအရ ကုသမယ် ဆိုရင် ထိရောက်မှုရှိပြီး လက်တွေ့ ပျောက်ကင်းစေမည့် ဆေးနည်းအချို့ကို ဖော်ပြပေးချင် ပါတယ်။ သဘာဝ လိမ်းဆေးဆီ – တမာဆီ(Neem oil) သွေးကိုတိတ်စေပြီး အရေပြားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး များစွာ အထောက်အကူပြု ပါတယ်။ နှမ်းကြတ်ဆီ (Flaxseed oil)ဟာ omega-3 and omega-6 များစွာကြွယ်ဝခြင်းကြောင့် …
မချစ်သင့်တဲ့လူအပေါ် ရူးရူးမိုက်မိုက်ချစ်မိနေခြင်းက ကိုယ့်ကို နာကျင်စေတာပါ
မချစ်သင့်တဲ့လူအပေါ် ရူးရူးမိုက်မိုက်ချစ်မိနေခြင်းက ကိုယ့်ကို နာကျင်စေတာပါ အချစ်က ပူလောင်စေတာ မဟုတ်ဘူး မချစ်သင့်တဲ့လူအပေါ် ရူးရူးမိုက်မိုက်ချစ်မိနေခြင်းက ကိုယ့်ကို နာကျင်စေ တာပါ ဒါပေမယ့် လူဆိုတာမျိုးကလဲ ခက်တယ်လေ ကိုယ့်ကို အဖက်မလုပ်တဲ့လူကိုမှ တမ်းတမ်းဆွဲဖြစ်နေ တတ်တာ မနေချင်မှန်းသိသိရဲ့နဲ့ ကိုယ့်အချစ်တွေ တစ်နေ့တော့ နားလည်မှာပါဆိုပြီး ဆွဲထားချင်ကြတာလေ အချစ်လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး ကိုယ့်အနားမှာ ရပ်နေတဲ့ လူတွေအပေါ် အများကြီး မျှော်လင့်မထားနဲ့ ဘယ်နေ့ ဘယ်ချိန် အချစ်တွေ ပျောက်သွားမလဲ မသိနိုင်ဘူးလေ… ကိုယ်ကသာ အနာဂတ်တွေအိပ်မက်တွေ မက်ပြီး မျှော်လင့်ချက်တွေ ထားနေတာ ဘယ်အချိန် လေမုန်တိုင်းတိုက်ပြီး ပျက်စီးသွားနိုင် မလဲ ဆိုတာ မသိနိုင်ဘူး ဒါကြောင့် ချစ်တော့ချစ်ပါ မျှော်လင့်ချက်တော့ …
သာယာတဲ့အချစ်ရေးဖြစ်ဖို့ မေ့မထားသင့်တဲ့အချက်များ လူတိုင်းလူတိုင်း ကတော့ ဘဝမှာ သာယာပျော်ရွှင်မှုတွေ လွှမ်းခြုံနေတဲ့ အချစ်ရေးကိုပဲ လိုချင်မိကြမှာပါ။ ကိုယ်တိုင် သာယာပျော်ရွှင် ချင်တယ်ဆိုရင် သူမရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုကိုလည်း မေ့ထားလို့ မရပါဘူး။ ဒါမှလည်း နှစ်ယောက်အတူ ပျော်ရွှင်တဲ့ အချစ်ရေးကို တည်ဆောက်နိုင်မှာပါ။ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ကွီးတို့ရဲ့အချစ်ရေးကို သာယာပျော်ရွှင်စေဖို့ မေ့ထားလို့ မရတဲ့ အချက်လေးတွေကို မျှဝေပေးချင် ပါတယ်။ ငွေရေးကြေးရေး /အချစ်မှာ ငွေရေးကြေးရေး ကဏ္ဍတွေမလိုဘူးလို့ ပြောကြပေမယ့် သူ့ကိုလည်း ထည့်မစဉ်းစားလို့ မရနိုင်ပါဘူး။ ချစ်သူနှစ်ဦးကြားမှာ သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ ဆက်ဆံရေးကို တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ဆိုရင် ငွေရေးကြေးရေးက တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေ အရေးပါနေ ပါတယ်။ နှစ်ဦးသား နားလည်မှုရှိတဲ့ ငွေကြေးသုံးစွဲမှုတွေရှိမထားရင် တချိန်ချိန်မှာ ပြဿနာ …
အငယ်ဆုံးသားသမီးတွေ အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါ ရှိတတ်တဲ့စရိုက်လက္ခဏာများ မိသားစုထဲက အငယ်ဆုံးသားသမီးတွေကို အငယ်ဆုံးမို့ ဆိုးတယ်လို့လည်း ပြောစမှတ်တွေရှိကြပေမယ့် တကယ်တော့ သူတို့မှာ ထူးခြားမှုတွေလည်းရှိပါတယ်။ အရှေ့က အကြီးတွေနောက်မှ မွေးလာတာကြောင့် အမြဲကိုယ်တစ်ဦးတည်း ဆိုတဲ့ ခံစားချက်မျိုးလည်း မထားတတ် ကြတာကြောင့် အငယ်ဆုံးတွေမှာ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်မှုဆိုတာလည်း လုံးဝမရှိပါဘူး။ အငယ်ဆုံးတွေ အသက် (၂၀)ကျော်လာတဲ့အခါ သူတို့မှာ ထင်ရှားလာတဲ့ တူညီတဲ့ စရိုက်လက္ခဏာလေးတွေ ရှိကြပါတယ်။ သိချင်ရင် အောက်မှာ ကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော် ။ (၁) အဖော်မင်ပေမယ့် တစ်ယောက်တည်းဆိုလည်းဖြစ်တယ်” တစ်ခုခုအစီအစဉ်ရှိလို့ မပျက်မကွက် လာတတ်တဲ့ သူဆိုရင် ကြည့်လိုက်ပါ။ အငယ်ဆုံးတွေပါပဲ။ သူတို့ဟာ တစ်စုံတစ်ယောက်အပေါ်အလေးထားမှုကို ကိုယ်တိုင် လာရောက်ခြင်းနဲ့ ပြသကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ …